Igumbi elisophahleni lwesitayela sezwe elisenhliziyweni ye-Preveza - I-Airbnb
Igumbi elisophahleni lwesitayela sezwe elisenhliziyweni ye-Preveza
I-i-loft ephelele ibungazwe ngu-Ioanna
Igumbi eliyingqayizivele lesitayela sesimanjemanje (amamitha-skwele angu-52), enhliziyweni ye-Preveza, ibanga lemizuzu engu-3 uhamba ngezinyawo ukusuka enkabeni yedolobha elinomlando kanye nezindawo ezinkulu zedolobha. Igumbi lethu elisophahleni elibukekayo, isitayela sezwe nendawo ethokomele, ekhanyayo, kunoma ngubani, lapho ehamba, efuna ukujabulela i-Preveza njengomuntu wendawo. Indawo yonke izogcinelwa wena kuphela. I-wi-fi esheshayo ne-air-conditioning iyatholakala!
Igumbi elisophahleni lisesitezi sesithathu sesakhiwo samafulethi omndeni wethu. Isanda kuhlelwa ngothando endaweni eyingqayizivele, lapho uphahla lokhuni olunamafasitela okukhanya kwesibhakabhaka luphumelela khona. Ilungele abantu abashadile, imindeni (izingane ezineminyaka engu-0 ubudala), abangane, noma abantu bebhizinisi abasebenza kumaphrojekthi endawo. Isiqhingi sase-Lefkada siphakathi kwemizuzu engu-20 ngemoto, ngakho-ke ikhaya litholakala ngokuphelele ohambweni lwansuku zonke oluya esiqhingini! I-Parga nayo ingasetshenziswa ngemizuzu engu-50 uma uhamba ngemoto. Izici zegumbi elisophahleni:
- Igumbi elisophahleni elinelanga/ elihle lesithathu
- Indawo eyodwa evulekile, ikhishi elisha, i-wc yakudala & i-balcony evulekile
- ukuhamba imizuzu engu-3 ukusuka enkabeni yomlando yedolobha.
- Ukuhamba ngezinyawo ukuya kunoma iyiphi indawo edolobheni
- Ihlotshiswe ngefenisha yomndeni
eqoqwayo elungisiwe - 40'' I-Smart TV 4K
- Umshini wokugeza izitsha wakamuva wezobuchwepheshe, umshini wokuwasha kanye nohhavini we-microwave
kwe-Wi-Fi - I-Air-condition ehlanganisa yonke indawo esophahleni
ovulekile onefenisha - Ikhishi elisha elinakho konke okusemqoka. Hlunga ikhofi & imishini yokwenza ikhofi ye-espresso etholakalayo.
- Amamephu e-Preveza/izincwadi njengesipho sokwamukela
- Eduze nazo zonke izinhlobo zezimakethe kuhlanganise nemakethe encane nokudla okusheshayo okuhlala kuvuliwe kuze kube sekupheleni kwesikhathi
- Ifanelekela ukuhlalisa abantu abangaba ngu-4 (umbhede owodwa olala abantu ababili, imibhede ephansi engu-2)
Ikhishi lisha futhi linakho konke okudingekayo, ungakwazi ukupheka nakanjani! Igumbi lokugezela liyi-wc yakudala. Akuyona inkulu, kodwa inakho konke okudingekayo, ngokucophelela ukuhlanzeka. Uzothola amathawula ahlanzekile, ikhithi yosizo lokuqala elincane nakho konke okudingayo ukuze ube nokuhlala okungenakulibaleka!
Phakathi nokuhlala kwakho, esikufunayo ukuthi uzizwe njengendawo yethu njengekhaya lakho. Igumbi elisophahleni lisesakhiweni esinezitezi ezintathu, esihlotshiswe ngendlela yethu, esibonisa lokho esikuthandayo nalokho esikuthandayo.
Lapho sihamba, sifuna ukuba nezinkumbulo ezenziwe; yingakho, sifuna indawo yethu ibe yilokho kanye, okuwukuthi isikhathi eside futhi sihlale siphila inkumbulo yohambo oluhle oluya edolobheni elihle.
Akukho lutho endlini yethu oluvinjelwe ezivakashini zethu, ngaphandle kwamaphathi, ukubhema nezilwane ezifuywayo, inqobo nje uma izivakashi zihlonipha ikhaya nomakhelwane bethu. Yonke indawo igcinelwe wena kuphela ngesikhathi samaholide akho.
Izivakashi zethu zingaxhumana nathi noma nini. Sizohlala sikhona ukuze uthole imininingwane eyengeziwe, nge-app ye-airbnb. Sizokunikeza incwadi yezivakashi namabalazwe, atholakala ethala, nezindawo ezitusiwe zomlando, ezinentshisekelo yamasiko, izindawo zokudla, iziphuzo, esithanda ukuzivakashela e-Preveza. Thina, u-Ioanna no-Maximos, noma abangane/umndeni bazokusiza nganoma yini ozoyidinga, ngaphandle kokukuphazamisa.
Ngesicelo sokuhlala isikhathi eside (ubusuku obungaphezu kuka-30)
ubusuku obungu-7 e- Preveza
Igumbi elisophahleni litholakala enkabeni yedolobha; noma kunjalo, litholakala endaweni yokuhlala, ethule, engenamgwaqo nomsindo.
Inombolo yepholisi: 00000592232
Hlola ezinye izinketho ezise- Preveza namaphethelo